Ahoana ny fanesorana ny fiarovana amin'ny PDF: fitaovana hampiasa | Famoronana an-tserasera
Mety ho, indraindray, mba hiarovana ny asanao, dia nanapa-kevitra ny hiaro PDF ianao. Saingy, raha mandeha ny fotoana iray, angamba rehefa te hijery azy ianao dia ho tsapanao fa hadinonao ilay teny miafina. Na mety mila miasa be amin'izany PDF izany ianao ary reraky ny mampiditra ny teny miafina isaky ny roa minitra. Soa ihany fa misy fomba fanesorana fiarovana amin'ny PDF.
Raha sendra an'io olana io ianao, na PDF izay nataonao na iray izay nampitaina taminao ary tsy fantatrao ny fomba esory ny fiarovana amin'ny PDF Hiara-miasa aminy dia ireto misy hevitra vitsivitsy momba ny fomba ahafahanao manao azy io mora foana. Manaraka ireo dingana azonao atao.
1 Fa maninona no voaaro ny PDF?
2 Unprotect PDF: fitaovana azonao ampiasaina
2.2 Fitaovana fanalana tenimiafina PDF
3 Aza miaro PDF mahafantatra ny teny miafinao
3.2 Mamoha PDF
Fa maninona no voaaro ny PDF?
Hafahafa ny mieritreritra mamorona PDF ary mametraka teny miafina aminy. Fa raha ny tena izy dia maro ny asa toy izao miaro ny asa efa nataony. Ary io no izy, raha tsy miditra ny teny miafina marina dia afaka jerena ilay rakitra. Na izany aza, nanao ny lalàna, nanao ny fandrika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia rafitra fiarovana aza izy io, ankehitriny dia misy fitaovana sy programa marobe afaka manala ny fiarovana amin'ny PDF.
Ankoatr'izay, mitondra olana hafa izy ireo: ny tsy maintsy ampidirinao tsy tapaka ny teny miafinao. Mahatonga izany mavesatra, indrindra raha manokatra sy manidy ny antontan-taratasy tsy tapaka ianao.
Ho fepetra fisorohana, tsara ny fametrahana fiarovana PDF, ary mety hanakana ny maro izany. Amin'izany dia hitahiry zavatra tsy manan-danja ianao, na amin'ny asanao, na amin'ny data tsy miankina ao anatiny, sns. Aza matoky velively, indrindra rehefa mandefa ny antontan-taratasy any amin'ny toerana hafa izay tsy voafehinao intsony.
Unprotect PDF: fitaovana azonao ampiasaina
Ahoana raha nametraka teny miafina tao amin'ny PDF ianao ary nanadino tampoka izany? Tsy mampidi-doza loatra izay lazaintsika; satria rehefa afaka kelikely dia afaka manadino izany ianao, indrindra raha miasa miaraka amina antontan-taratasy maro ianao.
Ho an'ireo toe-javatra ireo, ny fitaovana azontsika atolotra dia ireto manaraka ireto:
Ity programa ity dia iray amin'ireo fanta-daza indrindra ary mifantoka amin'ny zavatra iatrehantsika amin'izao fotoana izao: ny fanesorana ny teny miafina amin'ny PDF, ary noho izany ny fiarovana napetraka eo aminy.
Ary koa, tonga lafatra satria mandingana ny fiarovana ny programa saingy tsy manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona tany am-boalohany. Izany hoe mamela anao hijery ny atiny, na hanitsy azy io aza, nefa tsy manary ny zony ilay mpanoratra voalohany.
Fitaovana fanalana tenimiafina PDF
Araka ny tondroin'ilay anarana, ny zavatra hotratrarinao dia esory ny fiarovana amin'ny PDF mba hahafahanao manova sy manonta azy araka izay tianao. Mazava ho azy fa misy lesoka io, ary izay Raha voaaro amin'ny alàlan'ny tenimiafin'ny mpampiasa ny rakitra PDF dia tsy ho azonao atao ny mamoha azy.
Ity fitaovana ity dia an-tserasera, ary efa fantatrao ny fampitandremana izay arosonay aminao isaky ny mampiasa programa ankolafy fahatelo ianao: raha tena zava-dehibe ny antontan-taratasy dia tsara kokoa raha tsy atao sorona intsony ny fifehezana azy.
Raha hampiasa azy io, fotsiny tsy maintsy mampakatra ny PDF ianao ary miandry minitra vitsy vao hanao ny majika.
Tranonkala iray hafa azonao ampiasaina ho an'ity tanjona ity koa ny ILovePDF, mpamono fiarovana PDF tena mahery. Tsy maintsy mampakatra ilay rakitra fotsiny ianao ary afaka minitra vitsy dia hanaisotra ny teny miafina ary manokatra azy io hahafahanao misintona azy tsy misy olana.
Aza miaro PDF mahafantatra ny teny miafinao
Ahoana raha sendra toe-javatra hafa ianao? Ohatra, fantatrao ny teny miafina fa tsy azonao atao ny miditra azy isaky ny te hijery ilay antontan-taratasy ianao. Eto dia tsotra kokoa izy io, ary manana fitaovana maro hanaovana azy ianao, saingy izy rehetra ireo dia hitaky anao hiditra ny teny miafina, farafaharatsiny indray mandeha. Te hahafantatra an'iza izahay?
Ny safidy voalohany, ary iray amin'ireo mora indrindra ihany koa dia Google Drive. Ny sisa ataonao dia ampidiro amin'ny rahonao ilay rakitra. Ho adika tahaka izao, izany hoe, miaraka amin'ny teny miafina, ary raha ny marina, rehefa te hijery azy ianao dia hanontany anao izany.
Mba hanesorana azy dia mila manokatra ny antontan-taratasy ianao, mampiditra ny teny miafina ary manokatra azy ho anao. Raha vao misokatra dia tsindrio ny pirinty (ny bokotra izay miseho eo ankavanan'ny efijery, etsy ambony, ary izany no kisary an'ny mpanonta). Hiseho aminao ny takelaka hilaza anao hoe ahoana no tianao hatonta azy. Fa tsy tena hanao an'izany ianao.
Ao amin'ny "Destination", kitiho ny fanovana ary tadiavo ny Save as PDF.
Raha vantany vao omenao izany dia hiova ny efijery teo aloha ary hiseho ny bokotra Save. Tsindrio izy dia hilaza aminao hoe aiza no tianao hitahiry an'io PDF vaovao io. Mametraka ny toerana tadiavinao ianao ary kitiho ny Save indray.
Raha vao sintonina, mankanesa any amin'ny nitahirizanao azy ary sokafy. Raha nahavita azy tsara ianao dia hosokafana ny fisie PDF, midika izany fa tsy mila mampiditra teny miafina intsony ianao hijerena azy.
Safidy iray hafa, amin'ity tranga ity an-tserasera, dia ity. Averinay indray fa, raha antontan-taratasy tena manan-danja izy io, dia tsy tokony hataonao maty antoka izany satria tsy fantatrao izay azon'izy ireo atao amin'ilay antontan-taratasy, ary raha misy angon-drakitra manokana dia mety hahita olana ianao amin'ny fampiasana azy. Aleo foana mampiasa programa amin'ny solosainao toy izay miatrika loza mety hitranga amin'ny olon-kafa.
Na izany aza, raha tsy misy ny mitranga dia fitaovana iray afaka manampy anao io. Mila mampakatra ny PDF voaaro ianao ary manisy marika fehezanteny iray izay, raha tsy mahay teny anglisy ianao, inona no lazainy aminao dia mampanantena ianao fa manan-jo hanitsy izany PDF izanyRaha lazaina amin'ny teny hafa dia matokia ny finoanao tsara hahafantarana fa manao zavatra "ara-dalàna" ianao.
Raha vantany vao manamarina izany ianao dia tsindrio Unlock PDF. Manaraka, dia hangataka anao hiditra ny teny miafina momba ilay antontan-taratasy izy. Ary rehefa manao izany ianao dia tsindrio ny Tena Unlock.
Afaka minitra vitsy dia ho vonona ny hisintona ilay rakitra ianao.
Araka ny hitanao, ny fanesorana ny fiarovana amin'ny PDF dia tsotra raha fantatrao ireo fantsona tokony handehanana. Mazava ho azy, rehefa manao izany dia aza manao zavatra tsy ara-dalàna.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fanesorana ny fiarovana amin'ny PDF